Soro nwa gi soro ezigbo ulo n'echiche iri abuo na asaa - Ne gerekir?
Ihe omumu maka nwa m, Kedu otu m ga esi eji oge gasi nwa m?
Nwatakịrị bụ oge kachasị mkpa na ndụ anyị. Ihe ọbụla anyị ga - abụ, anyị ga - ewu n’oge a. Ọ bụ ndị nne na ndị nna guzobere ntọala a. Onyinye kachasị mma ị nwere ike inye nwa gị bụ oge ị na-eji ekpo ọkụ, na-arụ ọrụ, na-atọ ọchị yana agụmakwụkwọ. Mgbe anyị na ha nọ, anyị ga-apụ na ụwa anyị, laghachi na nwata anyị, na-arọ nrọ ma na-enwe ọ funụ. Ka anyị kwuo maka otu anyị ga - esi jiri oge ọma ndị a anyị nwere ike inye ha na onwe anyị ...
Omumu ihe na ihe uto ya na nwata
Anyị kwurịtara maka ihe omume dị mfe ma na-atụghị anya ya na mmemme ị na-anụbeghị. Anyị nwere ezigbo obi ụtọ ma na-atụ anya ikpe gị na nkwupụta gị.
☆ Comingghọ ọrụ kachasị mkpa nke egwu egwu site na ime ka ụmụaka duzie ya
Yiri ụmụaka gị uwe dị ka onye ntụzi. Kwadebe oche ya. Mee ihe ọ bụla onye nwụrụ anwụ gwara gị gwuo. Hapụ ya ka ọ họrọ uwe gị. Ka anyị hụ ka echiche nwa gị sara mbara na omume ọma gị!
☆ Nleta na agbapụ obere ihe nkiri
Lee, nke a bụ ihe omume anyị ji n’aka na ị ga-ekpori ndụ karịa. Chee ya echiche dịka akụkọ etinyere na TikTok. Ma ka akụkọ dịrị. Tụle ihe ị nwere ike gbaa ugbua, ọbụlagodi anyị malitere inwe anụrị. ?
Ihe mgbagwoju anya bara uru dika odi nma. N'ihi na mmeri nke mmalite na njedebe na-enye ndị mmadụ mpako na-enweghị atụ. Ma uru kachasị mkpa nke mgbaghoju anya; Ọ na - enyere aka iweli ọkwa IQ. Uru a dị n'ime mgbaghoju anya, nke anyị kwuru site n'ịgụ site na nyocha, bụ na ọ na-amanye onye ahụ ka o chee echiche.
Ndị na-egwu egwuregwu ahụ; ga-amanye ha iji ihe ọmụma ha n'ozuzu ha, ebe nchekwa, nkà ngosipụta gbasara ohere gbasara mbara igwe, mgbagha na usoro idozi nsogbu. Ọbụna ịmalite egwuregwu a maka ụmụ gị ga-abụ isi iyi nke nnukwu nganga maka gị. Mgbe ị gbanwere ọrụ ị rụchara ka ọ bụrụ ihe osise ma nyagide ya na mgbidi n'ụlọ gị, ọ dị ka anyị ga-ahụ nguzo gị n'ihu gị ...
☆ Na-akwadebe a ajụjụ
Ofdị egwuregwu a, nke ị nwere ike imere ụmụ gị ma maka obi ike onwe ha na ịhụ mmejọ ha na-atọ ụtọ, ga-enye gị nnukwu ọ joyụ. Ọ bụrụ na ị kwuo ebe ị ga-ahụ ajụjụ ndị ahụ, anyị chọrọ gị, ngwa anyị chọtara dị n’okpuru.
Na ngwa a, enwere ike ịsọ mpi na ndị ọzọ. Na njedebe, ị ga-enwe ike ịhụ ihe na-adịghị ma ọ bụ na-eme nke ọma, ebe ọ na-akọ ajụjụ ndị ị gboro.
Pịa maka Mmemme Childrenmụaka na Ajụjụ Banyere Mmemme
Ga-eju gị anya ịhụ ka ọ na-atọ ụtọ mgbe ị gwara ụmụ gị gbasara ncheta ha n’afọ ndị ha na-echetaghị. Can nwere ike ịgwa ha gbasara atụmatụ mara mma ha ma mee ka ha dị mpako maka omume ha. Na ihe omume a, nke ga - eme ka gị na ezinụlọ gị nọrịa oge, ị nwere ike ịga n’ihu n’ikwu ihe ncheta kachasị amasị gị na di ma ọ bụ nwunye gị, ndị nne na nna ma ọ bụ oge nwata gị.
☆ Na-ekwu maka nro onye ọ bụla
Olee ihe dị mkpa karịa iche na ị hụrụ gị n’anya? Nrọ ụmụ gị nwere ike ịdị iche na nke ị chere. Ige ntị n’echiche ha sitere na ha ga - eme ka ị mata ihe ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụtabeghị. Ọ ga-enye ya ịnụ ọkụ n'obi ime ihe maka nrọ ndị a.
☆ Na-atụ aro ka onye ọ bụla kwupụta àgwà ọma na omume ọjọọ ha na-eche banyere ibe ha.
O doro anya na anyị niile maara ibe anyị karịa ma ọ bụ karịa na ezinụlọ. Agbanyeghị, iji ntị anyị nụrụ nke a wee jiri anya anyị gbaa àmà n'oge ahụ na-akpata mmetụta dị iche iche mgbe ụfọdụ. Kedu onye ma, nwa gị achọpụtala akụkụ mara mma nke gị nke ị chọpụtaghị. Knowsnye maara, ị ga-amụta banyere otu akụkụ ọjọọ gị nke ị na-ahụghị mana nke ị na-ekwesịghị ime n'ezie. Gị, nwa gị, ma ọ bụ nwunye gị, ma ị nwere ike ịnwale nke a. Anyị na-atụ anya na a ga-ekwu ihe dị mma 🙂
☆ Na-akpọ aha, obodo, egwuregwu anụmanụ
Ọzọkwa, ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ na ịma aka. Kwere m, ụmụ gị ga-enwe ọ toụ n'abalị ahụ ị gụrụ.
☆ Na-eme egwu site na arịa ụlọ
Echefula mkpa ọ dị nkà. Ọ bụrụ n ’ị chere na mmetụta nwa gị ga-akawanye mma n’ihe a, ị ga-ehie ụzọ. Omume ọ bụla metụtara ọrụ ga-aba uru maka IQ (Ọgụgụ ọgụgụ isi) nwa gị na EQ (Ọgụgụ ọgụgụ isi nke Mmetụta) na ntụgharị uche n'ihe niile ga-agbanwe. Noisezụ ahụ ga-abụ ọkara elekere n'ọtụtụ oge. I nwere ike iguzo ya.
☆ Agụ akụkọ dị nkenke, ịmụ nkuzi
Read gụrụ ụfọdụ n’ime ha ma gwa ya ka ọ gụọ ụfọdụ n’ime ha. Akụkọ ndị dị mkpirikpi agaghị agba ya n'ihi na ọ ga-ezute akụkụ ndị na-eti ihe ngwa ngwa. Anyị na-atụ aro ka ị ghara ịgụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche, ọ dị mkpa ka ị kwuo maka ya ma chee maka ya obere oge.
☆ Na-anwa ime mimes
Ka anyị tụlee nkuzi vidio ozugbo. Anyị chọrọ ịmata etu ọ ga - esi mee 🙂
☆ Idozi ihe mebiri emebi ọnụ
Ọ bụrụ n’ị maara etu ị ga-esi weghachite ihe ndị agbajiri agbaji gị, emela ya n’onwe gị. Ime nke a na nwa gị ga-akụziri ya azịza ya na nwa gị ga-esoro ya nwee ọ ofụ.
☆ Na-eme achicha, achịcha ọnụ
Gụnye nwa gị na atụmatụ a, ọ bụrụ na ị nwere achịcha achịcha ịme.
☆ Hapụ ụmụaka na ejiji ha bụ ndị ọka ikpe na-aza ajụjụ
Kwe ka umuaka gi mekota onwe ha ma noro ha. Ikwu na dịrukwaa nsonazụ 🙂
☆ Gba egwu ma bikọ abụ ọnụ site na imeghe agba egwu asụsụ mba ọzọ na Youtube
Ka anyị nye otu ihe atụ ozugbo, ị nwere ike ịchọ vidiyo ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
☆ Ikiri ihe nkiri eserese
☆ Na-achọ na ọba albums
☆ Na-enye ha ohere igwu egwu kọmputa na ekwentị maka oge
Ọ dịghị mma ka gị na nwa gị wepụta oge. Mgbe ụfọdụ ị ga-ahapụrịrị ya naanị na anaghị egbochi ya kpam kpam nke teknụzụ. Ọ bụ ezie na akọwara nkà na ụzụ dị ka ihe na-emerụ ahụ, ọ bụghị eziokwu. Ozugbo emere mkpọchi nwata ahụ, ị ​​gaghị echegbu onwe gị.
☆ Me ụgbọelu mpempe akwụkwọ
Na-akụzi, na-elekọta, ma hapụ ndị ọzọ na nhazi ya. Hapụ ya ka ọ tee ụgbọelu ya, see ya, pịa ya ụzọ ahụ. Nke a ga - arụ ọrụ ya nke ọma ruo ogologo oge.
☆ Agba ọsọ
☆ Na-eme obere anwansi
Ọrụ a, nke ga-atọ ụtọ nke ukwuu, ga-emezigharị ọsọ ọsọ, ntụgharị uche na ọgụgụ isi. Nwere ike chọta nnwale maka ụmụaka na Youtube. N'agbanyeghị nke ahụ, ka anyị nye otu ihe atụ.
☆ Na-eduzi nnwale dị mfe
Anyị nwere ike ịkwado gị akwụkwọ nnwale nke Mad Scientist. Nweta ihe omume sayensị n'oge ọ dị obere ga-aba nnukwu uru. Ke adianade do, ọ bụ n'aka na ọ ga na-echeta ụbọchị ndị a 🙂 can nwere ike n'ezie ịchọta nnwale maka ụmụaka na Youtube. Ka anyị nye atụ ọzọ.
☆ Gba egwu / ịkụzi cheesi
☆ Gba egwu / ịkụzi backgammon
☆ Cardsgba egwu / ịkụzi egwuregwu na kaadị
☆ Egwu Okey / Nkuzi
☆ Na-esere ibe ha foto
Ndụ Ezinụlọ Ihe Covid-19